IGoogle Allo ngoku iyafumaneka, imbangi yeWhatsApp? | Iindaba zeGajethi
IGoogle Allo ngoku iyafumaneka, imbangi yeWhatsApp?
I-Allo ifikile, iinzame zikaGoogle zokuthatha umyalezo wentengiso yemiyalezo kwangoko. Nangona kunjalo, inembangi elukhuni, i-WhatsApp. Njengamaxesha onke, xa besungula umxhasi ongumthunywa okhawulezileyo, Kuya kufuneka sijonge ngasemva kwaye siqwalasele ukuba oku kuphehlelelwa okutsha kungangumbulali we-WhatsApp, intsimi apho uninzi lwalushiye ngasemva, njengeLine, iTelegram kunye neFacebook Messenger. Nangona kunjalo, namhlanje siza kugqamisa iindaba eziza kuGoogle Allo ngokubhekisele kuWhatsApp kwaye siza kuqaphela ukuba kuya kuba kufanelekile na ukufaka esi sicelo sitsha kwiqela le- «Ungabi Libi».
Siqala ngothelekiso, kuyo siza kuhlalutya ezinye zezona ndawo zichazayo zesicelo semiyalezo esitsha, apho idlula khona i-WhatsApp okanye engenayo le yokugqibela.
1 UGoogle Allo uhlakaniphile, uphendula ngokukhawuleza
2 Idityaniswa ngaphandle komthungo noMncedisi kaGoogle, uWhatsApp noSiri
3 Izitikha ezandayo nefashoni kunye nee-GIFs
4 Ukuba bucala? Yonke incasa
UGoogle Allo uhlakaniphile, uphendula ngokukhawuleza
UGoogle ufuna ukuya kude neAllo, kangangokuba injongo enkulu kukugcina ixesha kunye nokunxibelelana, iAllo iya kufunda kuthi kwaye isinike iimpendulo kunye neencoko ngokweminqweno yethu kunye nendlela yethu. Isicelo sinenkqubo yokufumanisa umxholo (imiyalezo, iifoto, iaudiyo ...) oko Siza kutolika ngokufanayo kwaye sinike iimpendulo ezahlukeneyo ezimiselwe kwangaphambili ukuze singachithi umzuzwana.
Le nkqubo yeyona inika intsingiselo kumdla weAllo, nangona kunjalo, abasebenzisi abaninzi baya kuyibona bekrokrela into yokuba uGoogle uyayithatha yonke imiyalezo ukuze asinike uncedo oluhambelanayo. Nangona kunjalo, yinto esele i-Gmail isenza ngokuzenzekelayo, ke ngoko, akufuneki sikhathazeke malunga nokuba bucala kuloo nto, sinokuthi siphulukene nale mfazwe kwangaphambili. I-WhatsApp ayinayo le misebenzi konke konke, nditsho nolwandiso, ekuphela kwendlela yokunxibelelana ngale ndlela kuWhatsApp kukusebenzisa iibhodi yezitshixo ezinjengeSwiftkey.
Idityaniswa ngaphandle komthungo noMncedisi kaGoogle, uWhatsApp noSiri
UGoogle Allo usebenza ngokubambisana noMncedisi kaGoogle, umncedisi wenkampani oseta iseva yayo yokuqala kunye neetshipsi ze LEGO. Ngale ndlela sinokucela ungenelelo lomncedisi kaGoogle ngqo kwisicelo okanye kuyo nayiphi na incoko. Eyona nto ikufutshane kwi-iOS yiGboard. Nangona kunjalo, Nangona ingadityaniswanga kwi-Android, kwimeko ye-iOS, i-WhatsApp inemisebenzi ethile yeSiriNangona singenakunxibelelana ngokuthe ngqo nesicelo, singathumela kwaye siphendule imiyalezo ngokuthe ngqo evela kumncedisi ka-Apple, kwelinye icala, anokucelwa nangaliphi na ixesha okanye imeko. Endaweni yoko, i-WhatsApp ayizukukwazi ukwenza le misebenzi kwi-Android, nangona kungekudala uGoogle azakuyivulela i-API kaMncedisi kaGoogle.
Izitikha ezandayo nefashoni kunye nee-GIFs
Zenziwe yiTelegram, iFacebook Messenger kunye neMessages. Izitikha ziya zanda ngakumbi, abasebenzisi abaninzi bafumana i-Emoji ikruqukile okanye ingonelanga. Ngethuba lokongeza izitikha, uluhlu olubanzi lweempendulo luyavulwa Ukuqwalaselwa kweendaba, ngokuchanekileyo leyo yinto elungileyo malunga nezincamathelisi, ukuba iipakeji ezintsha zisungulwe kuthathelwa ingqalelo iifashoni okanye abalinganiswa abadumileyo ngalo mzuzu.
Kwelinye icala, ii-GIFs (imifanekiso eqingqiweyo) ikwakhona kwiGoogle Allo. I-WhatsApp sele ivumela ukuhanjiswa okufanayo kwi-iOS, nangona kunjalo, ayifezekiswanga ngokuchanekileyo, into ebonakala ngathi ifike kwiiveki ezininzi. Ngokuqinisekileyo i-WhatsApp linyathelo elinye ngasemva xa kufikwa kumxholo wemultimedia.
Ukuba bucala? Yonke incasa
Isicelo seGoogle sine «imowudi yangaphakathi»Oko kuyasivumela ukuba sincokole ukuba sikhuselekile. Nangona kunjalo, ayisiyiyo indawo yokumisela, kuba i-WhatsApp ine-encryption yokuphela kwayo. Nangona kunjalo, i-Allo inomlinganiso wokhuseleko, kuya kuba nzima ukuthatha izikrini zencoko kwi-incognito, akunjalo?
IGoogle Allo sisicelo esigqibeleleyo kuneWhatsApp, asiyithandabuzi. Kodwa yile Line, iTelegram, iFacebook Messenger kwanangemihla yayo iBBMessenger yayinjalo Nangona kunjalo, eUbuninzi babasebenzisi basetyenziselwa iqonga lomyalezo oluhlaza, I-WhatsApp inenani elikhulu lokuthembeka elingazukusebenzisa iGoogle Allo ngaphandle kwentlekele.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » IGoogle Allo ngoku iyafumaneka, imbangi yeWhatsApp?
Buyela kwixa elizayo izihlangu zinomhla wokukhutshwa
Babonisa ukuba kunokwenzeka ukuba uthumele ulwazi lwe-quantum ngokukhanya